Gastronomy nke Austria, efere nri | Akụkọ Njem
Taa, anyị ga-awagharị uche anyị site na gastronomy ama ama nke Austrian. Typedị nri a nwere ọtụtụ mmetụta, gụnyere nri ndị Juu, Hungary ma ọ bụ Czech. Ọ bụ nri a na-ahụ maka nri ya, anụ ndị mara mma yana maka achịcha ya.
Anyị na-aga mata ụfọdụ ụdị nri nri Austrian, ụdị nri na-enye anyị nri dị ụtọ juputara na uto. Ọ dị mma ịmata gastronomy nke ebe ndị anyị gara n'ihi na ọ bụkwa akụkụ nke ọdịbendị na akụkọ ntolite ha.
2 Uchechukwu onyekwena
3 Nri anụ esi
4 Soseji nke Viennese
O doro anya na aha a amarala gị nke ọma, nke ahụ bụ na apụl apụl bụkwa nri a na-ahụkarị na ndịda Germany. Ọ bụ ihe gbasara a nnọọ mkpa mpịakọta nke mgwakota agwa nke bụ mgbe ụfọdụ puff achịcha dị iche iche. N'ime anyị na-ahụ apụl, shuga, paịlị, mkpụrụ vaịn na bred. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị itinye mkpụrụ ụfọdụ iji nye ya ekpomeekpo. A na-eme ya na oven ma na-ejikarị ya fesa ya na shuga icing na mgbe ụfọdụ yana ude ụtọ na uto vanilla. Na mpempe, a eji megharịa ọnụ na ị ga-agbalị na anyị ga-fọrọ nke nta ka N'ezie.
Este Ulo oriri nke vienna nwere mmetụta ndị Arab dị ka ọ dị. A na-ekwu na ndị Arab were ụzọ esi nri gaa Spain wee ga Italytali ma mesịa rute ebe a. Taa, ọ bụ otu n’ime nri ga-anwale nri Austrian. Akwadebe ya na anụ anụ anụ bee n'ime obere iberi, ebe ọ bụ na ị ga-agbakwunye batter. A ga-etinyezi ya na ntụ ọka, akwa ya na achịcha achịcha. Ọ bụ echiche dabara na Spanish Milanese anyị maara nke ọma, yabụ na efere a ga-abụrịrị nke maara nke ọma ma na-atọ ụtọ n'otu oge ahụ. Agbanyeghị, na nri Austrian, a na-eghekarị ya na bọta ma ọ bụghị mmanụ oliv. Banyere ụzọ nke ijere ya ozi, ha na-agbakwunye fries French ma ọ bụ salad dị ka akụkụ.
Nri anụ esi
Ejiri efere a Iendị anụ bekee nke Viennese. Anụ anụ a na ofe akwukwo nri ma ọ bụ mmiri nke na-enye ya ekpomeekpo. Mgbe esiri ya, a na-egbutu ya na mpekere ma jee ozi. Ọ na-esokarị poteto a sụrụ asụ na ụfọdụ compotes ma ọ bụ sọsọ iji ya na anụ. Na mkpokọta, ọ bụ nri pụrụ iche na ọdịnala nke bara uru ịnwale, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị hụrụ anụ n'anya.
Soseji nke Viennese
Ọ gaghị efu na Austrian nri soseji ndị Viennese a ma ama. Ọ bụ eziokwu na anụ na-arụ ọrụ dị mkpa na gastronomy ya, yabụ efere a bụ ihe ọzọ na anyị ekwesịghị ịkwụsị ịnwale. A na-eji ha anụ ehi ma ọ bụ anụ ezi sie ya ma smụọ ya. N'ikpeazụ, a na-enye ha ụzọ dị iche iche, agbanyeghị na enwere ike iri ha naanị site na achịcha. Anyị ga-achọta ọtụtụ ụlọ nri ebe anyị ga-eri ezigbo sọseji nke Viennese.
Nri a nwere nke ya mmetụta na Eastern Europe ọ makwaara nke ọma na ebe dịka Hungary. Ọ bụ efere a na-ewere dị ka onye dị umeala n'obi, mana taa ọ bụ akụkụ nke ọdịbendị nke mba a ma yabụ na anyị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ ụlọ nri ma wee nwaa ya. Ọ bụ anụ esiri esi nri ya dị mfe. A na-agbakwunye salad nduku na pasili. Nri dị mfe mana nke anyị kwesịrị ịnwale ma nwee obi ụtọ.
Efere a nwere anụ bọọlụ esi na mmiri nnu. Anụ bọọlụ dị iche n’akụkụ niile nke ụwa mana ha bụ isi nri Austrian. Enwere ike ime ha na nduku, achịcha ma ọ bụ ntụ ọka ma ọ bụ anụ, na-enwe nnwekọ na nke a na bọọlụ anụ nke enwere ike ịhụ n’ihe niile n’ụwa. Mana n ’obodo Ọstria, ha nwere ike ịnwe ihe dị iche iche.
na kuki na-akpọ dị ka na-ahụkarị n'oge ekeresimesi. N’ezie anyị niile ahụla ụdị kuki a n’ụdị ebe ndị ọzọ, ebe ha bịara bụrụ ndị ama ama. Ntụziaka na-adịkarị iche site n'otu ụlọ gaa na nke ọzọ, ọ bụ ezie na ihe doro anya bụ na ọ bụ kuki dị ụtọ ejiri mgwakota agwa dị mkpụmkpụ wee gbasaa wee bepụ ya na arịa nwere ụdị dị iche iche. Enwere ike itinye chocolate ma ọ bụ iberibe mkpụrụ osisi mịrị amị. Bụrụ na otu ọ nwere ike, ọ bụrụ na ị gaa Austria n’oge ekeresimesi ị ga-ahụ na kuki ndị a bụ kpochapụwo.
La Sacher achicha bụ ugbua achịcha dị iche iche n’ọtụtụ ụwa, otu n’ime swiiti ndị ahụ dị ụtọ nke ukwuu nke na ọ gafere oke ala. Ọ bụ achicha chọkọletị nke ejiri mebere mpempe abụọ chọkọleti na butter achicha ogbo na-ekewapụ na aprịkọt jam. Achịcha niile ahụ kpuchiri oyi na-acha chocolate nke na-enye ya ọmarịcha ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Austria » Gastronomy nke Austria: ụdị nri